janardan sharma-750 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more Follow
/ Mon, June 26, 2017
janardan sharma-750	Read counts:
31 जेष्ठ ३१ गते, २०७४ - २१ः५३	dabali**	यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
dabali** का अरु लेखहरु पढ्नुस्	खोटोको रकमले मावि तह सञ्चालन
जाजरकोट, १२ असार । दरबन्दी अभावमा छेडागाड नरपालिका–१ स्वडारीमा रहेको कालिका माध्यामिक विद्यालय विगत... नमुना कानुन पुग्यो स्थानीय तहमा, के-के छ व्यवस्था ?
काठमाडाैं, १२ असार । वैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको चुनावपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाझ कार्यविभाजन... यी हुन् महिला क्रिकेटबारे कम थाहा भएका ९ तथ्य
काठमाडाैं, १२ असार । महिला एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता हाल इङ्गल्याण्डमा जारी छ । यसै मेसोमा... केबुलकार दुर्घटनामा पाँचको मृत्यु
भारत, १२ असार । भारत प्रशासित काश्मिरको पर्यटकीय सहर गुलमार्गमा आइतबार एक केबुलकार दुर्घटनाग्रस्त... कोटईमाईमा चुनाव सर्यो, असार १६ गते हुने
रुपन्देही, १२ असार । रुपन्देहीको कोटईमाई गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा असार १६ गते चुनाव हुने भएको छ ।
खुल्ला... तीन बालबालिका मृत भेटिए
भोजपुर, १२ असार । तीन बालबालिका मृत भेटिएका छन् । मृत भेटिएका तीनै बालबालिका अरुण गाउँपालिका–१ प्याउलीबाट... एमालेका उम्मेदवारको घरमा बम विस्फोट
धरान, १२ असार । नेकपा एमालेबाट धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार तारा सुब्बाको घरमा आज बिहान बम... निर्धक्क भएर निर्वाचनमा भागलिन गृहमन्त्री शर्माको आग्रह
दाङ, १२ असार । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता निकै उत्साहित रहेको र राजनीतिक... पोर्चुगल र मेक्सिको सेमिफाइनलमा
रसिया, १२ असार ।पोर्चुगल र मेक्सिको कन्फेडेरेसन कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पोर्चुगलले न्युजिल्यान्डमाथि... विराटनगरः कांग्रेस–एमालेका बागी बलियो, यस्तो छ आँकलन
विराटनगर, १२ असार । दोस्रो चरणको असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचारको समय रातिबाट सकिएको... अरु धेरै
देउसीभैलो टोलीलाई दक्षिणा एक घरबाटै डेढ लाख !
प्रम कार्यालयको ३ महिनाको खाजा खाना खर्च ७ लाख, ओली महिनामै ९ लाख गर्थे
लौ चिन्नुहोस् : उपचारका नाममा राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने यिनै हुन्
द्वन्द्वको दश वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियाको दश वर्ष कमजोर
प्रचण्डको सचिवहरुलाई २६ बुँदे निर्देशन, के छ निर्देशनमा ? (पूर्ण पाठ)
एमालेमा विद्रोहको तयारी : संशोधन पक्षधरहरुले छुट्टै भेला गर्दै
कहाँ अड्कियो संविधान संशोधनको हलो ?
भिडन्तकै तयारीमा एमाले
बाबुरामलाई सांसद बनाउने तयारी, बालुवाटारमा प्रचण्डसँग छलफल
संविधान संशोधनबारे के भन्छन् लेखक तथा बुद्धिजीवी ?
एमालेको विरोधमा सत्तापक्षको आन्दोलनः केपी ओलीको पुत्ला दहन
राष्ट्रपतिकै अगाडि ओली कड्किएपछि सर्वदलीय बैठकमा बाझाबाझ
मधेसमा आन्दोलन चर्काउन उपेन्द्र र बाबुरामको कार्यगत एकता
संघीयता नै आफूहरुले नचाहेको ओलीको खुलासा
कुलमानलाई काम गर्न नदिने प्रधिकरणका संचालकमाथि उर्जामन्त्रीको यस्तो एक्शन
kdbali_posts.post_date > '2017-06-19 14:19:55'
[post_date] => 2017-06-26 07:34:07
[post_date_gmt] => 2017-06-26 01:49:07
[post_content] => काठमाडौं, १२ असार । नयाँ शक्ति पार्टीले अपेक्षित आकार लिन नसकेपछि पार्टीको एउटा समूह विकल्पको खोजीमा लागेको छ । विशेष गरेर माओवादीबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नयाँ शक्ति पार्टी अब नबन्नेमा ढुक्क छन् ।
साँघु साप्ताहिकमा खबर छ– स्रोतका अनुसार, यस्तो निष्कर्षमा पुगेका पूर्वमाओवादीहरुको नेतृत्व नेता देवेन्द्र पौडेलले गर्दै आइरहेका छन् । पौडेलले यस्तै निष्कर्षमा पुगेका नेताहरुसँग माओवादी केन्द्रमा जाने विषयमा नै छलफल गरिसकेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचअघि नै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने गरी पौडेलले छलफल अघि बढाए पनि प्राविधिक कारणले रोकिएको थियो । स्रोतका अनुसार, पहिलो चरणमा आएको परिणामले पौडेलको समूह माओवादीमा प्रवेश गर्न हतारिएको छ ।
‘चुनावअघि नै नयाँ शक्ति छाडेर माओवादीमा जानेबारे पौडेलले छलफल गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचनलगायतका कारण माओवादीमा जाने तयारी रोकिएपनि असार १४ को निर्वाचनपछि पुरानै घरमा फर्कने तयारी छ ।’
यसरी जाँदैछ नयाँ शक्तिमा पहिरो
[post_title] => देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्ता माओवादीमा फर्कने तयारी
[post_name] => %e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8c%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%83%e0%a4%a4%e0%a5%8d
[post_modified] => 2017-06-26 07:39:34
[post_modified_gmt] => 2017-06-26 01:54:34
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=138170
[ID] => 137332
[post_date] => 2017-06-21 08:26:14
[post_date_gmt] => 2017-06-21 02:41:14
[post_content] => काठमाडौं, ७ असार । दोस्रो चरणको स्थानइि निर्वाचनमा उठ्न चाहनेहरुसँग रकमको मोलमोलाई गरेको प्रमाण फेला परेपछि एमाले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रुपनारायण श्रेष्ठ कारवाहीस्वरुप पार्टी मुख्यालयमा तानिएका छन् । उनी एमालेको मोरङ सहइञ्र्चार्ज हुन् र त्यहीँ उनले उठ्तीपुठ्ती गरेको उजुरी छ । रकमको मात्रा कम, तर एमालेभित्र बहसको स्तरचाहिँ राज्यलक्ष्मी गोल्छ प्रकरणजत्रै बनेको छ ।
जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ– त्यसमाथि रुपनाराणले आफू बच्नका निम्ति विभिन्न व्यक्तिको नाम पोलेका छन् । कतिपयले उनको आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन् । तर, छानवीनचाहिँ भइरहेको छ ।
यसरी रुपनारायणलार्इ सप्रमाण फन्दामा पार्ने कामरेड हुन्, अदुवा र अलैंची बेचेर पैसा कमाएका डिल्लीराम खतिवडा । साविकको केराबारी गाविस र हाल कायम हुन आएको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बासिन्दा खतिवडा त्यहाँका अगुवा एमाले हुन् । पूर्वाञ्चल पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष उनी धनकुटाको भेडेटारमुनि जेफले डाँडामा होमस्टे चलाउँछन् । उनको घरै त्यहीँ पर्छ ।
रुपनारायणले टिकट नपाएका राजकुमार र अर्जुनसँग पनि पैसाको सौदा गर्न भ्याइसकेका रहेछन् । उनले मधुमल्ला र उर्लाबारीमा वडाध्यक्षका आकांक्षीसँग बढी कुरा गरेको पार्टी अनुसन्धानबाट खुलेको धुम्बाराहीस्रोतले जनाएको छ । प्रदेश कार्यालयमा उजुरी परेपछि सोधिएको लिखित स्पष्टिकरणमा उनले मिक्लाजुङ गाउँपालिका र सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाका लागि आफूलाई विनोद ढकालले अह्राएर त्यस्तो काम गरेको किटानी गरेका छन् ।
रूपनारायणलाई अहिले धुम्बाराही मुख्यालय तानेर अनुसन्धान गरिँदैछ र कारबाही गर्ने सबै जिम्मा छ महासचिव ईश्वर पोखरेललाई । उनले यस्तो काम गर्नुअघि कहाँ, कसलाई उम्मेद्वारीको चाहना छ भन्ने बुझे । उनी आफैं पनि केपी ओली पक्षधर मानिन्छन् । मोरङका नेता गुरु बराल केपीका विश्वासपात्र । रुपनारायण चुनावअघि हरदम उनैसँग हुन्थे र कुरा बुझ्थे । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गर्न थाल्थे । उजुरीकर्ता डिल्ली खतिवडा माधव पक्षधर मानिन्छन् ।
पूर्व कोशी इञ्चार्ज जीवन घिमिरेहरु अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गर्छन्– आफ्नै कार्यकर्तासँग त यसरी रकम उठाउनेले व्यापारी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँग झन् कति कुम्ल्याउन भ्याएका होलान् ?
[post_title] => एमालेमा गुपचुप राखिएको एउटा डरलाग्दो काण्ड
[post_name] => %e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%aa-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%8f
[post_modified] => 2017-06-21 08:38:02
[post_modified_gmt] => 2017-06-21 02:53:02
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=137332
[post_date] => 2017-06-24 07:13:20
[post_date_gmt] => 2017-06-24 01:28:20
[post_content] => काठमाडौं, १० असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरवारि मूल सडकमै एउटा चिया पसल । दाउरा बलिरहेको चुलोमा चिया पाक्दै थियो । चिया झुपडीको पुरानो बेन्चमा बसेर गन्यापधुरा गाउँपालिकाका माओवादी अध्यक्ष उम्मेदवार ईश्वरीदत्त भण्डारी आफूले पाउन सक्ने मतको हिसाब निकाल्दै थिए । डलेल्धुरा जिल्लाको यही गाउँपालिका वडा नंं. १ मटेलामा हो प्रधानमन्त्री देउवाको गाउँ । यो गाउँपालिकामा माओवादीका अध्यक्ष पदका प्रत्याशी भण्डारीले देउवाको वडाको हिसाब–किताब गर्दै थिए । यो वडामा २ हजार ८ मतदाता छन् । साविकको आसखर्क गाविस अहिले गाउँपालिका भइसकेको छ । यही आसखर्क गाउँको खोलापारि मटेलामा देउवाको पुख्र्यौली घर छ । देउवाका आफन्त भने त्यहीँ बस्छन् ।
अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– माओवादीका उम्मेदवार भण्डारीले मतदाताको हिसाब गर्दा आफैंले जित्ने आँकडा पाए । नजिकैका अर्का एकजनाले जवाफ फर्काए 'लौ अब किन प्रचार गर्नुप¥यो र, तमिले जितिगयौ', भण्डारी मुस्कुराए । त्यही बगलमा लठ्ठी टेक्दै एक वृद्ध मिसिन आइपुगे । उनी देउवाका आफन्ती भाइ, धर्मसिंह देउवा थिए । चियापसलमै गफिइरहेका एकजनाले जिस्क्याए 'च्या खान्या हो, माउवादीको....? ' देउवाले जवाफ फर्काए 'च्या पनि माओवादी र कांग्रेसको होला र ? , त्यो ता भोटका बेला मात्रै हो ।' प्रधानमन्त्रीको घर कहाँनेर त ? प्रश्न खस्न नपाउँदै देउवाले भण्डारीतिर औंलो देखाएर भने, 'त्यहाँ थियो, माओवादीले जलाइदिए...' भण्डारी मुस्काइरहेका थिए ।
नाताले भाइभाइका छोरा पर्ने धर्मसिंह देउवाले आफ्ना भाइ शेरबहादुर देउवालाई दुई महिनाअघि मात्रै काठमाडौंमै भेटेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए । धर्मसिंह पनि ०२६ सालदेखि ०३६ सालसम्म लगातार दुईपटक गाउँका प्रधानपञ्च थिए । ०३६ सालमा भएको जनमतसंग्रहका बेला उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि ०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट उनी सभामुख पनि हुनुभएको थियो । देउवाको गाउँमा अहिलेसम्म कांग्रेसले हारेको छैन । त्यसैले पनि चुनाव जित्नेमा ढुक्क छन् कांग्रेसी । यो वडाबाट कांग्रेसका प्रत्याशी अध्यक्ष चेतराज भट्ट भन्छन्, 'संगठन पहिलादेखि नै बलियो हो, हामीले जित्छौं हामीले हार्ने चान्सै छैन ।' उनीसँग एमालेका रामचन्द्र जैशी र माओवादीका विक्रमबहादुर देउवा चुनावमा भिड्दै छन् । विक्रम शेरबहादुरकै काकाका छोरा हुन् ।
बीस वर्ष अघिको चुनाव सम्झिँदै शेरबहादुरका भाइ धर्मराज भन्छन्, '२० वर्षपछि यो बुढ्यौलीमा फेरि भोट हाल्न पाइने भो, त्यो चुनाव र यो चुनावमा हेर्दा जना धेरै बाठा भइसक्याछन् ।' त्यहीबेला एक हुल महिला रोपाइँ सकेर फर्कंदै थिए । महिला मतदाता पनि कम देखिएनन् । उनीहरूलाई चुनावले त उत्साहित गराएको छ नै त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको गाउँका महिला, अलि सचेत नै देखिए । एकजना महिला कमली सार्की भनिन्, 'अब ता पैलाजस्तो काँ हुन्छ र, भोट त राजेर हाल्न्या हो, अरूले भन्ने हुन्न ।' पहिलाजस्तो गाउँको वा घरको नेताले भनेर अब भोट नहाल्ने उनको भनाइ थियो । 'टाइम त फेरियो नि, यी अब प्रधानमन्त्रीसँगै भोट हाल्न पाइने भो ।'
हिउँदको बेलामा दिनको एक समय जिप मात्रै चल्नसक्ने उनको गाउँको बाटोमा वर्षायाममा गाडी चल्न सक्दैन । अहिले पनि बाटो केही बिग्रिसकेको छ। देउवाको पुख्र्यौली घरको खोलापारि जाने त झन् बाटो पनि छैन । एउटा सानो झोलुंगे पुल बनेपछि बल्ल त्यहाँ जान सजिलो भएको छ । चार/चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको आफ्नै गाउँको बाटो किन यस्तो त ? दुईपटकसम्म प्रधानपञ्च भइसकेका उनका भाइ धर्मसिंहले भने, 'ऊ त सानैबाट देशको अनि सारा देशका जनताको विकास हेर्ने भैगो, अब गाउँको विकास त हाम्ले गर्ने हो ।' घरका महिलाजति सबै रोपाइँमा व्यस्त छन् । युवाहरू आफू समर्थक पार्टीको चुनावी प्रचारमा टाढाटाढा गाउँगाउँ पुगेका छन् । त्यसैले देउवाको टोल अहिले सुनसानजस्तै छ । वरिपरिका घरहरू ठडिएका छन् । तर, देउवा जन्मिएको घर भने युद्धकालमै माओवादीले ध्वस्त पारिदिएको थियो ।
[post_title] => प्रधानमन्त्री देउवाका भाइ माअोवादीका उम्मेद्वार
[post_name] => %e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%89%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ad%e0%a4%be
[post_modified] => 2017-06-24 07:13:20
[post_modified_gmt] => 2017-06-24 01:28:20
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=137850
[post_date] => 2017-06-20 13:26:15
[post_date_gmt] => 2017-06-20 07:41:15
[post_content] => गुल्मी, ६ असार । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावको मनोनयनको दिन । धुर्कोट गाउँपालिका २, पिपलधाराका शेरबहादुर केसी बडो खुसीयालीका साथ आफ्नाउम्मेदवारलाई हौसला दिन उत्साहपूर्वक गाउँपालिका केन्द्र पुगे । तर जव केही घण्टा आफ्ना साथीहरुसंग भलाकुसारी गरे, अनि उम्मेदवारी दर्ताको समय भयो उनको उत्साह एकाएक निराशामा परीणत भयो । ‘२० वर्ष पछि आएको चुनाव हो, भोट किन खेर फाल्नु जित्ने उम्मेदवारलाई दिने निर्णय गरेँ’ बेलुकी फर्कँदा उनले साथीहरुसंग भने ‘सबै वार्डका मान्छे भेला भएको ठाउँमा थाहा भयो भुपाल पोखरेल गाउँको विकासका लागि राम्रो मान्छे रहेछन् ।’ भुपाल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् ।
बिहानसम्म अर्कै पार्टीको प्रचार गर्दै गएका यूवा एकाएक माओवादी उम्मेदवारको समर्थन गर्दै फर्केका उनीमात्र होईनन् । धेरै यूवाले उम्मेदवारको वास्तविकता बुझेपछि जित्ने राजनीतिका लागि भन्दापनि विकासका लागि भोट दिने सल्लाह गरे । ‘हाम्रा उम्मेदवार पनि नराम्रा होईनन् तर अहिलेसम्मको विकासको कुरा तुलना गर्दा उनी अब्बल देखिए, जसले जनताको काम गर्छ उसैलाई भोट हाल्ने हो’ हाडहाडेका मनोज थापाले भने ‘स्थानीय चुनाव हो, वडामा हाम्रै आस्थाको पार्टीलाई जिताउँछौँ तर गाउँपालिकामा काम गर्नेलाई चुन्छौँ ।’
बिहान उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा फरक कुरागर्नेहरु साँझ फर्कँदा फरक व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दै फर्केको धुर्कोट २ का नरबहादुर खनालले बताए । ‘राजनीति हो, यस्ता कुरा भैरहन्छन तर अहिलेका यूवाले काम गर्नेलाई चुन्छौँ भन्न राम्रो हो’ उनले भने ।
कांग्रेस माओवादी तालमेल संग एमाले एक्लै भिड्ने
धुर्कोट गाउँपालिमा एमाले एक्लै र काँग्रेस माओवादी केन्द्र संयुक्त रुपमा चुनावमा भिड्दैछन् । तालमेल अनुसार गाउँपालीका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भुपाल पोखरेल र उपप्रमुखमा काँग्रेसका शिव केसी भिड्दैछन् । संयुक्त प्यानलसंग एमाले एक्लै भिड्दै छ । एमालेका कृष्ण घिमीरे प्रमुख र रीता थापा उपप्रमुखका उम्मेदवार छन् । घिमीरे अघिल्लो स्थानीय निकायको चुनावमा ईलाका सदस्य समेत हुन् । उनलाई पनि कुनै दाग नलागेका उम्मेदवारको रुपमा एमालेले प्रमुखका प्रतिस्पर्धी बनाएको हो ।
मनोनयन नै विजयउत्सव जस्तै
आईतबार भएको मनोनयन दर्तामा दुवै तर्फका उम्मेदवारका समर्थक बाजागाजा र जुलुस सहित सहभागी थिए । उनीहरुको नाचगान हेर्दा विजयउत्सव जस्तै देखिएको ६ नंबर वडाका बलबहादुर पछाईले बताए । तालमेलका संयुक्त उम्मेदवार र विकासप्रेमी यूवाप्रतिको आकर्षणका कारण पनि काँग्रेसमाओवादी उम्मेदवारको जुलुस १० गुणा धेरै भएको उनको धारणा छ । ‘उम्मेदवारी दर्ता नै जुलुसमय बनाउन तछाडमछाड देख्दा चुनापप्रति नै उत्साह लाग्यो’ उनले भने ‘कस्ले जित्ने छिनोफानो त १५÷१६ तिर भईहाल्ला तर, यहि उत्सवलाई आधार मान्नेहो भने चाहिँ माओवादीले हजारौँ कार्यकर्ता उतारेर मनोबल उच्च राख्यो ।’
काममा पोख्रेल अगाडी
धुर्कोटमा लामो समयदेखि एमाले राजनीति हुँदै जनप्रतिनिधीसम्म भएका घिमीरे र जनयुद्धकालदेखि जिल्लामै विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका भुपाल पोखरेल बिचको चुनावी प्रतिस्पर्धा छन् । दशक भन्दा बढी उमेर अन्तर भएका यी दुई प्रतिस्पर्धि दुवै निश्कलंक उम्मेदवार भएपनि कामको हिसावले भने पोख्रेल निकै अगाडी भएको स्थानीयको भनाई छ । ‘दुवैमा खोट छैन, तर यो बेला काम पनि हेर्ने बेला रहेछ’ धुर्कोट गाउँपालिका ६ का यूवराज पाण्डेले भने ‘एकपटक ईलाका सदस्य भईसकेको व्यक्ति र जनयुद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका व्यक्तिको काममा पोखरेलको काम धेरै राम्रो छ ।’ उनले उम्मेदवार चुन्ने अधिकार जनताको आफ्नो स्वतन्त्रा भएपनि अहिले गाउँमा विकासको कामप्रति जनलहर चलेको बताए ।
पोखरेललाई छाडिदिने भण्डारी पनि संगसंगै
पहिला आफू गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार उठेका नेपाली काँग्रेसका महेन्द्र भण्डारी पनि चुनावमा संगै हिँडेका छन् । उनले गाउँको मुहार फेर्न कस्सिएका यूवालाई जिताउन आफू पनि लागेको बताए ।े ‘हामीलाई राजनीतिक कुरा भन्दा पनि गाउँको विकास चाहिएको हो’उनले भने ‘गाउँपालिकाको विकासका लागि राम्रो र जनप्रिय यूवालाई मैले साथ दिन पाउँदा खुसी छु ।’ भण्डारी काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भई गाउँमा चुनाव प्रचार शुरु गरेपनि पछि माओवादीसंग तालमेलमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी पोख्रेललाई प्रमुख पद छोडिदिएका हुन् ।
[post_title] => मनोनयनमा जाँदा एमाले, फर्किँदा माओवादी
[post_name] => %e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%a8%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a5%8d
[post_modified] => 2017-06-20 13:26:15
[post_modified_gmt] => 2017-06-20 07:41:15
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=137234
[ID] => 137478
[post_date] => 2017-06-22 09:46:59
[post_date_gmt] => 2017-06-22 04:01:59
[post_content] => काठमाडौं, ८ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको महानगरपालिकाको दोस्रो बैठकले मेयर, उपमेयर तथा सदस्यहरुका लागी मोबाइल खरिद गर्ने र बैठक भत्ता तोक्ने काम गरेको छ ।
महानगरको चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा मोनोरेल चलाउने घोषणा गरेका एमालेका निर्बाचित मेयर शाक्याको प्रस्तावमा मेयर र उपमेयरलाई विल बमोजिम र अन्य सदस्यहरुका लागी ३० हजार बराबरको मोबाइल खरिदको निर्णय भएको हो । साथै सिमकार्ड समेत महानगरपालिकाको खर्चबाट गर्ने र प्रत्येक महिनामा २५ सय सम्म फोन खर्च बितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
साथै बैठकले बैठक भत्ताका लागी १ सदस्य बराबर १ बैठकको भत्ता मेयर र उपमेयरले १५ सय र सदस्यहरुले १ हजार रुपैयाँ समेत तोकेको छ ।
यो निर्णयबाट मेयर र उपमेयरले लाखौंको मोबाइल किन्नका लागी बाटो खुलाएको महानगरका एक सदस्यले बताए ।
यसै बैठकले भुकम्पपिडितका लागी सरकारले दिने भनेको ट्याक्सी काठमाडौंमा गुडाउन नदिने समेत निर्णय गरिएको छ । यो निर्णय सँगै भूकम्पपिडितको पिडामा थप पिडा थपिने देखिन्छ ।
साथै बैठकले अहिले तत्कालका लागी जनप्रतिनिधिलाई खर्च भन्दै ३५ लाख रुपैँया निकासा गर्ने निर्णइ समेत भएको छ ।
[post_title] => खोइ मोनोरेल ! महानगरको निर्णयः आफैंलाई मोबाइल किन्ने र भत्ता तोक्ने
[post_name] => %e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%87-%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0
[post_modified] => 2017-06-22 15:01:26
[post_modified_gmt] => 2017-06-22 09:16:26
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=137478
[ID] => 137372
[post_date] => 2017-06-21 13:36:13
[post_date_gmt] => 2017-06-21 07:51:13
[post_content] => गुल्मी, ७ असार । युद्धकालमा गाउँ छाडेर हिँडेका धेरै कांग्रेस एमालेका स्थानीय नेता शान्ति प्रकृयापछि धमाधम गाउँ फर्के, युद्धबाट आएका माओवादी कार्यकर्ता रोजगारीका लागि देश विदेश भौतारिए । तर गुल्मीको नेटा, दर्लिङ्ग, अर्खाबाङ्ग, छापहिले, अर्जे आसपासका केही गाविसमा भने त्यसको ठीक विपरीत भयो । शहर पसेका नेता गाउँ सम्झेर फर्केनन् तर बहुदलिय व्यवस्थामा आफ्नो गाउँलाई विकट भनेर नामाकरण गरीएको भन्दै लामो भुमिगत जीवनबाट फर्केका माओवादी कार्यकर्ता गाउँ डुल्न थाले ।
१२ वर्षमा गाउँमा बाटो बने, धारामा पानी आयो, विजुली बल्यो, गाउँको पुरानो संरचना नै फेरीएर नयाँ बन्यो । गाविस फेरीएर गाउँपालिका बनेपछि, गाउँमा विकासको लहर चलेपछि भने गाउँ छाड्ने र गाउँ बस्ने नेताहरुको भेट जुराईदिएको छ, स्थानीय तह चुनावले । करीब एक दशकदेखि मधेस झरेका मालिका ४ अर्खाबाङ्गका रीत बहादुर थापा, दुई दशकदेखि काठमाडौ छिरेका मालिका ७ घमिरका ज्ञानबहादुर कार्की रआधा दशक भूमिगत भएपछि गाउँ बसेका मालिका ६ अर्जेका देविराम अर्याललाई यो संयोग जुरेको हो । उनीहरु तीनै जना अहिले मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुन् ।
सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम र काठमाडौ धाईरहनुपर्ने बाध्यता हटाई सबै अधिकार गाउँमै ल्याउँछौँ भन्दै लडेका अर्याल आफ्नो पार्टीको एजेण्डाले जितेपछि खुसीसाथ आफू जनताको साथ पाउने आशमा चुनावी मैदानमा होमिए तर उनलाई चुनौति दिन आईपुगे लामो समय शहर बसेका कार्की र थापा ।
कार्कीः गाउँका राम्रा शिक्षक, शहरका सफल बोर्डिङ्ग सञ्चालक
छिमेकी गाविसको अर्जे मावि र आफ्नै गाउँको देविस्थान माविका शिक्षक रहेका कार्की २०५४ सालमा काठमाडौं छिरेका हुन् । काठमाडौमा राम्रो बोर्डिङ्ग स्कूल चलाएका उनी लामो समयपछि गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर गाउँ छिरे । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । निजि विद्यालय सञ्चालनमा सफल मानिने उनी २ दशक अघि गाउँमा हुँदा राम्रो शिक्षकको रुपमा कहलिएका थिए ।
थापाः पहिलाका सोझा नेता, बुटवलका सफल घरजग्गा व्यवसायी
अर्खाबाङ्गका थापा लामो समय गाउँमै बसेर नेकपा (एमाले)को राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् । २०५४ सालमा ईलाका सदस्यको रुपमा निर्वाचित रहेका उनी २०६० सालदेखि रुपन्देही झरे । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा गाउँ पुगेर प्रचारप्रसारमा जुटे । आफ्नो घरजग्गा व्यवसायका कारण त्यसपछि भने गाउँमा विरलै देखिएका उनी एकैपटक गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर गाउँ छिरे ।
अर्यालः युद्धकालका सिपाही, शान्तिकालका विकासे नेता
तत्कालिन माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धमा लागेका अर्याल अर्जे निवासी हुन् । उनी २०५६ सालमा जनयुद्धमा होमिए । शुरुमा जनमुक्ति सेनाको प्राविधिक विभागमा रहेका अर्याल २०५८ साल असार २२ मा घाईते भएपछि संगठनतर्फको जिम्मेवारी लिएर गाउँ छिरे । त्यस–उप्रान्त युद्धकालमा नै गाउँमा बाटोघाटो बनाउने अभियान शुरु गरेका उनी निरन्तर गाउँमै बसे । बजेटका लागि काठमाडौ धाईरहने उनी गुल्मीको जिल्ला पार्टी संगठन, गाउँका संघसंस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गरीरहेका छन् । त्यस क्षेत्रका विद्यालय, बाटो, विद्युत, खानेपानी, सिँचाई, पर्यटन लगायतको विकासका लागि आफू लडेको दावी गर्ने अर्यालले राजनीतिक पहुँचको आधारमा अरबौँ रकम आफ्नो गाउँ लगेको समाचार गत बैशाख २८ गतेको हिमाल खवरपत्रिकाले छापेको छ ।
पर्यटक भर्सेज बजेट
प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि सबैले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको गुणगान नै गाउँछन् तर मतदाताले भने आफनै तरीकाले विश्लेषण गर्छन् । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्यासी तीन जनालाई पनि मतदाताले आ–आफनै पहिचान दिएका छन् । कांग्रेसका कार्की र एमालेका थापालाई १० वर्षभन्दा लामो समय नफर्केपछि पर्यटक उम्मेदवार भनेर आलोचना गर्छन । तर चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा मतदातालाई प्रष्ट पार्ने क्रममा कार्की र थापा दुवै जनाको एकै खाले भनाई छ ‘हामी रोजगारीको आवश्यकताले व्यवसायका लागि शहर छि¥यौँ, गाउँको आवश्यकताले गाउँ फर्कियौँ ।’ तर जनताले शहर पसेर गाउँ बिर्सनेको साटो स्थानीय उम्मेदवारलाई अवसर दिएर सहयोग गर्नुपर्ने जनताको सुझाव छ । ‘उहाँहरुको आवश्यकताले व्यवसाय गर्नुभयो भने अब गाउँ आएर मेहनेत गरेपछि मात्र उम्मेदवारी पाउनुपर्ने हो, गाउँमा दिनरात खटेकालाई यसपाली दिनुपर्ने थियो’ घमिरका कृष्ण लम्सालले भने ‘गाउँमा पैसा सकेर राजनीति गर्ने पाखा, शहरबाट आएर पैसा खन्याउने काखा हुँदा गाउँको विकासका लागि ध्यान पुग्दैन ।’
उता अर्यालको पनि एउटा क्षेत्रमा मात्र मनलाग्दी बजेट ल्याउने भनेर गाउँमा आलोचना हुने गरेको छ । ‘विकासका लागि सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, उहाँको पहुँच भयो भन्दैमा मालिकामा मात्र धेरै बजेट ल्याउँदा देशका ७ सय ४३ स्थानीय तह हेर्नुपर्दैन ?’ अर्खाबाङ्गका खुमानन्द अर्यालले खबरडबलीसँग भने ‘सुनिन्छ गुल्मीमा आएको बजेटको पनि ४१ प्रतिशत मालिकामा आयो रे, के हाम्रो मात्र विकास भएर सबै समस्या समाधान हुन्छ ?’ हिमाल खवरपत्रिकाका अनुसार राज्यमन्त्रीलाई सिधै पत्र लेखि अरबौँ रकम रकमान्तर गर्ने उनी एकमात्र नेता हुन् ।
पछिल्लो बजेट अनुसार नेपालभरी सबैभन्दा बढी रणनीतिक र प्रादेशिक सडकले जोडिने मालिका एकमात्र गाउँपालिका हो, जहाँ प्रादेशिक र रणनीतिक महत्वका ठूला सडकमात्रै ५ वटा सडक सो गाउँपालिका हुँदै जोडिन्छन् । यसबाहेक प्रत्येक टोल–टोलका साना मोटरबाटोका लागि करोडौ रुपियाँ विनियोजन भएको छ । तर अर्याल यो आलोचना गलत भएको बताउँछन् । ‘हामी राजनीति गर्नेको काम नै गाउँको विकासका लागि लडेर बजेट ल्याउने हो’ उनले भने ‘बरु म बजेट ल्याउँछु, गाउँमा हातेमालो गरेर विकासका काम प्रभावकारी बनाउनुप¥यो ।’
कार्की र थापा बसाईसराई नै गरेर सपरीवार जिल्लाबाहिर बसोबास गर्छन् तर जनयुद्धकालमा प्रेम बिवाह गरेकी अर्यालकी श्रीमति रीज्जु श्रेष्ठलाई माओवादी केन्द्रले रुपन्देही जिल्ला कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकोले उनी पारिवारीक भेटघाटमा समेत समय मिलाउन नसक्ने समस्यामा छन् । ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता गाउँको विकास हो, त्यसका लागि काठमाडौं धाउने क्रममा रुपन्देही बसेर परीवारसँग भेट्छु’ उनले भने ‘सपरीवार जिल्लामै बस्नेगरी जिम्मेवारी दिन पार्टी तहमा पनि पहल गरीरहेको छु ।’
[post_title] => ‘टुरिष्ट’सँग माओवादी उम्मेदवारको रोचक भिडन्त
[post_excerpt] => सहर पसेका नेता गाउँ सम्झेर फर्केनन् तर बहुदलिय व्यवस्थामा आफ्नो गाउँलाई विकट भनेर नामाकरण गरीएको भन्दै लामो भुमिगत जीवनबाट फर्केका माओवादी कार्यकर्ता गाउँ डुल्न थाले । १२ वर्षमा गाउँमा बाटो बने, धारामा पानी आयो, विजुली बल्यो, गाउँको पुरानो संरचना नै फेरीएर नयाँ बन्यो । गाविस फेरीएर गाउँपालिका बनेपछि, गाउँमा विकासको लहर चलेपछि भने गाउँ छाड्ने र गाउँ बस्ने नेताहरुको भेट जुराईदिएको छ, स्थानीय तह चुनावले । युद्धकालमा गाउँ छाडेर हिँडेका धेरै कांग्रेस एमालेका स्थानीय नेता शान्ति प्रकृयापछि धमाधम गाउँ फर्के, युद्धबाट आएका माओवादी कार्यकर्ता रोजगारीका लागि देश विदेश भौतारिए ।
[post_name] => %e0%a4%9f%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b8%e0%a4%81%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%89%e0%a4%ae%e0%a5%8d
[post_modified] => 2017-06-22 08:27:43
[post_modified_gmt] => 2017-06-22 02:42:43
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=137372
देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्ता माओवादीमा फर्कने तयारीएमालेमा गुपचुप राखिएको एउटा डरलाग्दो काण्डप्रधानमन्त्री देउवाका भाइ माअोवादीका उम्मेद्वारमनोनयनमा जाँदा एमाले, फर्किँदा माओवादीखोइ मोनोरेल ! महानगरको निर्णयः आफैंलाई मोबाइल किन्ने र भत्ता तोक्ने‘टुरिष्ट’सँग माओवादी उम्मेदवारको रोचक भिडन्त Team Khabardabali